करिश्माको छोरी कविताले कपडा लगाउन नजानेपछि… – jagritikhabar.com
करिश्माको छोरी कविताले कपडा लगाउन नजानेपछि…
कलाकारले पहिरनामा ध्यान नदिदाँ मज्जा क बन्ने गरेको छ । विशेषगरि, नेपाली हिरोइनहरुले पहिरनलाई न ज र अन्दाज गर्दा उनीहरु ट्रो लको शि का र बन्ने गर्दछन् । यस्तैमा, नेपाली चलचित्र क्षेत्रको सदावहार नायिका करिश्मा मानन्धरको छोरीको कपडा लगाउने तरिका क्यामरामा कैद भएको छ । कविता मानन्धर नेपाली सिनेमा क्षेत्रको नव नायिका हुन् । भर्खरै, फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेकि कविताले हरेक कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पहिरनमै उनी चु के कि छिन् । अभिनेता शिव श्रेष्ठ प्रस्तुतकर्ता रहेको फिल्म ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ को गित रिलिज कार्यक्रममा कविताको पहिरन वि वा दि त बन्न पुग्यो । धेरै समयअघिको उक्त भिडियो सार्वजनिक भएसँगै धेरलै कविताको पहिरनको खि ल्ली उडाएका थिए ।
करिश्माको यस्तो अभिव्यक्ति
करिश्माको सुन्दरताको आज पनि उस्तै चर्चा हुन्छ । कुनै समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एक छ त्र राज गरेकी करिश्मा आफ्नी छोरी कविता मानन्धरलाई पनि यही क्षेत्रमा अगाडि ल्याउन चाहन्थिन् । करिश्माको योजना त उनले नै निर्देशन गर्ने चलचित्रबाट छोरीलाई यो क्षेत्रमा डेब्यू गराउने भन्ने थियो । तर, यो सफल हुन सकेन ।
आफ्ना साथी शिव श्रेष्ठले कवितालाई डेब्यू गराउन चाहेपछि करिश्माले हुँदैन भन्न सकिनन् । यसपछि, कविता चलचित्र ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’को नायिका बनिन् । तर, चलचित्र निर्माण सुरु गर्दा जुन जोशका साथ काम अगाडि बढेको थियो, त्यो विचमा गएर रोकियो । चलचित्र नै रिलिज हुने या नहुने भन्ने दु वि धा उत्पन्न भयो ।
यतीसम्म कि, चलचित्रको स्क्रिप्ट अनुसार पूर्ण दृश्य नै खिचिएन । चलचित्रका कलाकारको डबिङ नै गरिएन । शिव श्रेष्ठ जस्ता कलाकारले बनाएको चलचित्रमा किन यति हे ल च क्राई भयो यो शिवले नै जान्ने कुरा हो । तर, उनले आफ्नै छोरा शक्ति श्रेष्ठ र करिश्माकी छोरी कविताको करिअर नै स म स्यामा पारिदिएका छन् ।
माघ १ गतेबाट चलचित्र रिलिज भएपनि दर्शक हलसम्म आएनन् । चलचित्रले पोष्टरको पैसा पनि उठाउन सकेन । चलचित्र रिलिज हुने भन्ने चर्चासँगै नायिका करिश्मा मानन्धरले अ सन्तुष्टी जनाउँदै आएकी थिइन् । उनले, छोरीको धेरै दृश्यहरु काटिएको भन्दै अ सन्तुष्टी व्यक्त गर्दै आएकी थिइन् । जसलेगर्दा, करिश्मा र शिवको मित्रतामा समेत फा टो आएको छ ।
तर, चलचित्र रिलिज भएर प त्ता सा फ भएपछि करिश्माले सामाजिक संजालमा यसको शिर्ष गीत शेयर गर्दैै लेखेकी छिन्–‘अरुलाई दोश दिएर महत्वपूर्ण बनाउन चाहन्नँ । तर, बच्चा त राम्रो थियो ।’
करिश्माले चलचित्र रिलिज अगाडि पनि यसको बिषयमा कुरा गरेर शिव श्रेष्ठलाई चर्चामा ल्याउन चाहेकी थिइनन् । चलचित्र रिलिज भएपछि पनि उनको रिस शिवसँग कम भएको छैन । उनले अरुलाई दो ष दिएर महत्वपूर्ण बनाउन नचाहने उल्लेख गर्नुको कारण पनि यही हो । तर, उनले बच्चा राम्रो थियो भनेर कविता र शक्तिको कामको भने प्रशंसा गर्न खोजेको देखिन्छ ।
कविता र शक्ति राम्रो भएपनि चलचित्र रिलिज सही ढंगले गर्न नसक्दा चलचित्र असफल भएको वुझाई करिश्माको छ ।
करिश्माले चलचित्र जस्तो भएपनि बच्चा त राम्रो थियो नी भनेर कविताको प्रशंसा त गरेकी छिन् । तर, के कविताले चलचित्र यात्रालाई निरन्तरता देलिन त ?
आमा छोरीको कुरा
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरको उमेर सुन्दा जसले पनि जिब्रो नै टो क्छ न् । किनकी, करिश्मा ४० कटेकी फिटिक्कै लाग्दिनन् । उनको यही सुन्दरताले नै उनलाई आजसम्म फिल्ममा चर्चामा राखिदिएको छ ।
तर, अब त करिश्माकी छोरी कविता मानन्धर नै हिरोइन बनिसकेकी छिन् । छोरी हिरोइन बन्दा पनि करिश्माको सुन्दरताको चर्चा फिल्म बजारमा कम भएको छैन । बरु, छोरी भन्दा आमा राम्री भन्ने प्रतिक्रिया सुनिन्छन् । छोरी नै हिरोइन बनिसक्दा पनि करिश्माको पहिरनमा बदलाव आएको छैन । बरु, झनै छोट्टिन थालेको छ । फिल्म ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’को कार्यक्रममा अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर र उनकी छोरी कविता मानन्धरले वन पिस पहिरन लगाएका थिए । तर, त्यही पहिरनले छोरीलाई भन्दा आमालाई बढी है रा न बनायो । बस्दा, करिश्मा निकै सम्हालिएकी थिइन् ।
करिश्माले ताली बजाउँदा समेत दुबै हात उठाउन सकिनन् । कारण, छोटो पहिरनका कारण ‘वा र्ड रो ब मा ल फ क्स न’को शि का र नबनियोस् भन्ने कुरामा उनी सचेत बनिन् । यसैले, अरुले बसिरहेको कुर्चीबाटै आफ्नो भनाई राख्दा करिश्मा उठेर छेउमा पुगेर मन्तव्य राखिन् । करिश्माको छोटो पहिरनमा उनका पति विनोद मानन्धरको पनि आँखा गएको थियो । आखिर, छोटो पहिरन लगाएर बस्न गाह्रो हुन्छ भने लगाउनै पर्छ भन्ने छ र ? यसै दर्शकले प्रतिक्रिया दिएका होइनन्–‘छोरी भन्दा आमा त रु नी ।